प्रदेश हाक्दै सुदूरपश्चिमका दुई डीआईजी, यस्तो छ ट्रयाक रेकर्ड !
अपराध-सुरक्षा अशोज २४, २०७७
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि नेपाल प्रहरीले पनि त्यहीँ अनुसारको संगठन पुर्नसंरचना गर्दै आएको छ। यसअघि अञ्चल प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी बस्दै आएको थियो। संघीयतामा गएपछि अञ्चल हटेर प्रदेशमा रुपान्तरण भएको छ। प्रदेश भएयता भने प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० प्रमुख रहने व्यवस्था भएको हो।
अवैध क्रसर उद्योगदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी निकासी रोकथाममा धानुक निर्ममतापूर्वक लागेका छन्। ६ महिनामै धानुकले लुम्बिनी प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा मजवुद बनाउन सफल भएको भन्दै नागरिकबाट प्रशंसा पाएका छन्। तस्करहरुसँग मिलोमतो गरेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रहरीलाई कारबाही समेत गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीक र कमान्ड क्षमता भएका धानुक हालका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री पछि हुने आईजीपीका दाबेदार समेत हुन्। यसरीनै पन्त धानुकभन्दा एक ब्याच सिनियर हुन्। डीआईजी बढुवा भने उनीहरु सँगै भएका थिए। बैशाख २०४९ देखि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका पन्तले पनि यसअघि विभिन्न जिल्ला प्रमुख भएर काम गरेका छन्।
Previous Postसरकारी छाप किर्ते मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
Next Postअनसनरत डा. केसी र सरकारबीच वार्ता सम्पन्न, अहिले ९ः३० मा अनशन ताेड्दै डा. केसी